Ọnọdụ Injinia na gam akporo: Kedu ihe ọ bụ na otu esi enweta ya | Gam akporosis
Gam akporo ekwentị nwere ọtụtụ ụdịdị na ọrụ, nke n'ọtụtụ ọnọdụ na-ezo. Nke a bụ ihe anyị nwere ike ịchọpụta ekele koodu nzuzo nke dị na sistemụ arụmọrụ. Ọ bụ ihe dịkwa mkpa maka ọnọdụ injinia na sistemụ arụmọrụ. Enwere ike ịnwe ụfọdụ n'ime gị mara karịa maka ọnọdụ a, mana ọ amachaghị.
Ya mere, n'okpuru anyị na-agwa gị ihe niile gbasara ọnọdụ engineer na gam akporo. Yabụ ịmara ihe ọ bụ na otu anyị nwere ike isi nweta ya. Ebe ọ bụ na ọ bụ ihe nwere ike ịba oke uru na ekwentị anyị, ọ nwere ike ịba uru dị oke.
1 Gịnị bụ ọnọdụ njinia
2 Kedu ihe anyị nwere ike iji ọnọdụ a mee
3 Otu esi enweta ọnọdụ engineer na gam akporo
3.1 Ọnọdụ injinia MTK
3.2 Koodu nzuzo
Gịnị bụ ọnọdụ njinia
Ọnọdụ injinia bụ menu zoro ezo na anyị na-ahụ na ekwentị gam akporo. Ọ bụghị otu ihe ahụ dị ka ọnọdụ ndị nrụpụta, mana ọ na-enye anyị ohere ịnweta ozi gbasara ngwaike nke igwe ma gbanwee ntọala ụfọdụ edepụtara na ngwaọrụ ahụ. I nwekwara ike ime ule arụmọrụ maka ihe dị iche iche, ma chọpụta ma ihe ọ bụla na-arụ ọrụ.
Ọnọdụ engineer na gam akporo bara ezigbo uru, ya mere, ọ nwere ike ịdịrị ndị ọrụ n ’sistemụ nrụọrụ ohere ịnweta ọnọdụ a. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe dabere na ekwentị ọ bụla, ọ bụghị ụdị niile nwere ohere ịnweta ọnọdụ a. Ma, ọ dị mkpa ịmata ya.
Kedu ihe anyị nwere ike iji ọnọdụ a mee
Ọnọdụ injinia na gam akporo na-enye anyị ohere ịnweta ọtụtụ ọrụ, nke ga - enyere gị aka ịgbanwe akụkụ ụfọdụ na ekwentị. Fọdụ ọrụ anyị nwere ike iji ọnọdụ a mee ihe ndị a:
Deba aha IMEI: Nọmalị, ekwentị gị nwere IMEI koodu, ma ọ bụrụ na ịnweghị ya, ịgaghị enwe ike iji kaadi SIM. Ya mere, ọ dị mkpa inwe ọrụ a.
Hazie igwefoto: Gbanwee ndabere ụkpụrụ nke a ngwa ma ọ bụ nwere ohere elu ntọala.
Hazie Bluetooth: Ọzọkwa, ọ na-enye gị ohere ịgbanwe ụkpụrụ ndabara ma nweta ntọala ha dị elu.
Gbanwee adreesị MAC: Ọ bụrụ na egbochila gị na netwọk WiFi, ọnọdụ injinia na gam akporo na-enye gị ohere ịgbanwe adreesị MAC ma nwee ohere ịbanye na netwọk ahụ ọzọ.
Mara ọnọdụ batrị: Anyị na-ejikarị ngwa iji nweta ozi a, ma anyị nwere ike ịnweta ya ekele maka ọnọdụ a na ekwentị. Ọ na-enye anyị ohere ịmata data gbasara okpomoku gị, ahụike gị ma ọ bụ okirikiri gị.
Mee ka WiFi gị dịkwuo elu: Ọnọdụ Injinia na-enye ohere ịnweta ntọala WiFi dị elu na ekwentị gị, na-enye gị ohere ịmepụta njikọ siri ike karị.
Mụbaa olu: Ọ bụrụ na oke olu ekwentị adịghị ezuru gị, ịnwere ike ịbawanye ya karịa karịa iji ọnọdụ a na ekwentị gị.
Nhazi nhazi: -Enye gị ohere ịchịkwa akụkụ ụfọdụ na-ezo aka ekwentị processor
Ya mere, dịka ị pụrụ ịhụ, ọnọdụ a nwere ike ịbụ ihe bara ezigbo uru na ekwentị. Ebe ọ bụ na ọ ga-enye anyị ohere ịgbanwe akụkụ ụfọdụ, nke anyị na-enweghị ohere, ma ọ bụ nke anyị ga-etinye maka ngwa.
Otu esi enweta ọnọdụ engineer na gam akporo
Ọ bụrụ na anyị amaraworị ihe ọnọdụ a na-enye anyị ohere ime, a ga-enwe ndị ọrụ nwere mmasị iji ọrụ a na ekwentị ha. Ke ofụri ofụri, anyị nwere ụzọ abụọ iji nweta ozi a na ekwentị. N'otu aka, enwere ike ịnweta site na koodu na ngwaọrụ ahụ, nke dịgasị iche dabere na ika na gam akporo. Ma anyị nwekwara ngwa na-enye anyị ohere ịnweta ọnọdụ injinia a na ekwentị. Anyị na-agwa gị gbasara nhọrọ abụọ a:
Etu ị ga-esi rụọ ọrụ nhọrọ ndị nrụpụta na Google Play
Ọnọdụ injinia MTK
Ọ bụrụ na ị wụnye ngwa a na ekwentị gị, ị ga-enwe ohere engineer mode na gam akporo. Usoro a na - arụ ọrụ nke ọma, ọkachasị na ekwentị nwere MediaTek processor. Yabụ ọ dị mfe iji usoro, ngwa ahụ bụ n'efu ma anyị agaghị akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla iji ya.
N'aka nke ọzọ, ụzọ nke ahụ anyị nwere ike iji na ndị a bụ iji a koodu na ekwentị, nke ga-enye anyị ohere ịnweta ọnọdụ injinia ahụ na gam akporo. Nzọụkwụ ma ọ bụ koodu dị iche iche dabere na akara nke ekwentị. Ya mere, anyị na-egosi gị ụzọ ọ bụla, dabere na akara ị nwere:
Samsung: Tinye koodu * # 0011 # na ngwa ekwentị, wee pịa bọtịnụ aka nri elu wee pịa Key Ntinye. Jirizie koodu Q0
Xiaomi: Tinye koodu dị na ekwentị ngwa * # * 6484 * # * na ndị na-esonụ menu tinye koodu * # * # 64663 # * # *
Huawei: Na nke a anyị ga-eji koodu na ngwa ekwentị, nke ga-abụ: * # * # 2846579 # * # *
Sony: Iji nweta engineer mode i nwere tinye koodu a na ekwentị gị na ngwa: * # * # 7378423 # * # *
OnePlus: Iji nweta ohere maka nhọrọ dị elu na nke a, ị ga-eji koodu ahụ 36446337 #
OPPO: Na akara ndị China ị ga - eji koodu a: 36446337 #
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Ọnọdụ Injinia na gam akporo: Ihe ọ bụ na otu esi enweta ya
Daalụ, mana ọ naghị arụ ọrụ na Huawei G628
Door Kickers zoro ezo site n'ọnụ ụzọ nke mkpanaka gị ka ị mee iwu mwakpo